Hadiyadihii arooskeyga la iigu keenay ayaan sii iibiyay si aan ganacsi u furto’ | Berberanews.com
Home Qubanaha Hadiyadihii arooskeyga la iigu keenay ayaan sii iibiyay si aan ganacsi u...
Hadiyadihii arooskeyga la iigu keenay ayaan sii iibiyay si aan ganacsi u furto’
Barnaamij isbuucle ah oo ay BBC-da sameyso ayaa lagu soo bandhigaa taariikhda hoggaamiyeyaasha ganacsiga. Toddobaadkan waxaan la hadalnay Jeff Lawson, oo qeyb ka aasaasay isla markaana madax ka ah Shirkad tiknoolojiyad ah oo ku taalla Mareykanka, taasoo lagu magacaabo Twilio.
Jeff Lawson wuxuu diyaar u ahaa inuu maalgashado ganacsigiisa cusub ee shirkadda Twilio, ka hor inta aysan si lama filaan ah dadka ugu maleynin in dhaqaalaha dunida uu burbur qarka u saaran yahay.
Maalin Isniin ah 15-kii bishii Sitembar ee sannadkii 2008-dii, Jeff iyo labadiisa saaxiib ee ganacsiga la abuuray waxay soo galeen shir ay ka qeyb galayeen dad maalgaliyeyaal ah oo ay rajo ka qabeen, waxaana uu shirkaas ka dhacayay gobolka Silicon Valley.
In ay dhaqaalaha maalgalinta ah helaan waxaa uga dhinnaa “in si rasmi ah loogu dhawaaqo oo kaliya”, sida uu dib u xasuusanayo Jeff, oo xilligaas ay da’diisu ahayd 31 sano.
Balse nasiib darro, bangigii maalgalinta ee Mareykanka oo lagu magacaabi jiray Lehman Brothers ayaa burburay habeenimadii ay Axadda sii baxeysay.
Burburka bangigaas ayaa sababay mid ka mid ah marxaladihii ugu naxdinta badnaa ee soo maray dhibaatooyinkii dhaqaale ee xilligaas ka jiray dunida.
“Shirka ayaan soo fariisannay, isla markiina waxaan ogaanay in bangihii shaqooyinkiisa la xiray”, ayuu yidhi Jeff. “Dadku way yaabanaayeen, waxay is lahaayeen ma dunidii ayaa soo gaba gaboobeysa?”.
“Dadkii shirkadda ila aasaasayay iyo aniga waan is eegnay, waxay fikraddeenna abuurista ganacsiga ah noola muuqatay mid khasaartay”.
Fikradda ganacsi ee ay markaas hayeen Jeff iyo labadiisa saaxiib ee kala ah Evan Cooke iyo John Wolthuis waxay ahayd inay abuuraan shirkad tiknoolojiyad ah, oo loogu tala galay in lagu xiriiro, haddey ahaan lahayd farriimaha, wicitaanka ama muuqaallada la isku waco.
Rajada ku saabsan in fikirkooda ganacsi uu guuleysto waxay ahayd mid aad u hooseysa.
Ka dib markii lagu hungoobay maal galintii, Jeff wuxuu sheegay inuu dareemay in shirkaddii ay billaabeen bishii March ee isla sannadkaas 2008-da ay howsheeda dhan noqotay mid hadda dib loo soo billaabi doono.
Laakiin waxay go’aansadeen in aysan quusanin, isaga iyo raggii ganacsiga la furayayna waxay lacag kasoo deynsadeen qoysaskooda iyo saxiibadood, si ay ganacsigooda ugu aasaasaan qeybihiisa ugu horreeya.
Markii ay dhidibadii ugu horreeyay taageen, Jeff iyo xaaskiisa, oo lagu magacaabo Erica, waxay iibiyeen hadiyadihii loogu keenay arooskooda.
Macmiilkii ugu horreeyay ee shirkadda Twilio kuwoo xirmay wuxuu ahaa nin naqshadeeyay website ama bog internet oo loogu tala galay iney isticmaalaan dadka raadinaya taleefannadooda.
Marka aad arki weyso telefoonkaaga, waxaad booqaneysaa boggan, kadib waxaad galineysaa lambarkaaga, 1 doolar ayaad bixineysaa, isla markiina telefoonkaaga ayaa soo dhacaya isagoo laga soo wacayo adeeggan gudihiisa.
Maalinba maalinta ka dambeysay macaamiil dheeraad ah ayaa kusoo xirmeysay shirkadda Jeff iyo saaxiibbadiis, horumar kale ayeyna kusii tallaabsanayeen.
Hadda waqtigan la joogo, shirkadda Twilio oo uu fadhigeedu yahay magaalada San Francisco waxay ku jirtaa liiska suuqa saamiyada New York, qiimaheeduna wuxuu ku kacayaa in ka badan $14 bilyan oo doolar.
Iyadoo dakhliga sannadlaha ah ee soo galay sannadkii 2008-dii uu ahaa $650milyan oo doolar, macaamiisheeda kumannaanka ah waxaa hadda ka mid ah shirkadaha Uber, WhatsApp, Coca-Cola, AirBnB, Twitter iyo eBay.
Previous articleMaxaad kala socota duuliyaha koobaad ee diyaaradda burburtay?
Next articleMansa Musa: Boqorkii dahabiga ahaa